Yiyiphi i-Titration and What Is Used For
I-Titration yinkqubo apho isisombululo esisodwa sisongezwa kwesinye isisombululo esinokuthi siphendule phantsi kweemeko apho umthamo ongezelelweyo unokulinganiswa ngokuchanekileyo. It isetyenziselwa kwimizi yemichiza yokuhlalutya ukucacisa ingcamango engaziwayo ye-analyte echongiweyo. Izikhundla zixhaphake ngokuqhelekileyo ngeempendulo ze- asidi- base , kodwa zingabandakanya ezinye iintlobo zempendulo .
I-Titration yaziwa nangokuthi i-titrimetry okanye uhlalutyo lwe-volumetric. Iikhemikhali yengxube engaziwayo ibizwa ngokuba yi-analyte okanye i-titrand. Isisombululo esisisigxina se-reagent yenkxalabo eyaziwayo kuthiwa yi-titrant okanye isihloko. Umthamo we-titrant owenziwe (ngokuqhelekileyo ukuvelisa utshintsho lombala) ubizwa ngokuba ngumthamo wokubhaliweyo.
Indlela yokubhaliweyo eyenziwa ngayo
I-titration eqhelekileyo isetyenziswe nge-Erlenmeyer flask okanye i-beaker equkethe umthamo owaziwayo ohlaziyiweyo (ingxube engaziwayo) kunye nomqondiso wokutshintsha umbala. I-pipette okanye i-burette equlethe i-concentrant of titrant ifakwa ngaphezu kwebhola okanye i-beaker ye-analyte. Umqulu wokuqala wepipette okanye i-burette urekhodwa. Isiqinisekiso sigxininiswa kwisisombululo se-analyte kunye nesalathisi de ukuphendula phakathi kwe-titrant kunye ne-analyte iphelile, kubangele utshintsho lombala (ekupheleni kwendawo). Umthamo wokugqibela we-burette urekhodwa, ngoko ke umthamo opheleleyo osetyenziswayo unokumiselwa.
Uxinzelelo lwe-analyte lungabalwa ngokusetyenziswa kwefomula:
C u = C u V M / V a
I-C yi-concentration ye-analyte, ngokuqhelekileyo ngokuhamba
C t yinkxalabo ye-titrant, kwiiyunithi ezifanayo
T ngumthamo we-titrant, ngokuqhelekileyo ngeelitha
M i-mole ratio phakathi kwe-analyte kunye ne-reactant kwi -equation chemical equation
Umlinganiselo we-analyte, ngokuqhelekileyo kwiilitha
Umthetho weMilinganiselo emininzi Umzekelo Ingxaki
Iintlekele zoLwandle oluPhambili kuma-1990s